China Plansifter Ukwenziwa kunye Factory | IChinatown
Ingqolowa Flour Mill
Iprojekthi yokuDibanisa umgubo
Flour Milling Izixhobo
Izixhobo zokucoca iinkozo
Mechanical Ukudlulisa Izixhobo
Ukuphefumla kunye nokuDlulisa izixhobo zomoya
Isilinda esenziwe ngaphakathi
I-TQSF Series Gravity Destoner
Umahluli weTotary Rotary Separator
I-Roller Mill yombane
Njengomatshini wokuhluza umgubo weprimiyamu, i-plansiftert ilungele abavelisi bomgubo abaqhuba ingqolowa, irayisi, ingqolowa yedurum, i-rye, i-oat, umbona, i-buckwheat, njalo njalo.
Isicwangciso sesicwangciso se-FSFG sesinye sezona mveliso zethu ziphambili ziphuhliswe kwisiseko seengcinga ezintsha. Iyakwazi ukuhluza ngokufanelekileyo kunye nokulinganisa i-granular kunye ne-pulverulent materials. Njengomatshini wokuhluza umgubo weprimiyamu, kufanelekile kubavelisi bomgubo abenza ingqolowa, irayisi, ingqolowa yedurum, i-rye, i-oat, umbona, i-buckwheat, njalo njalo. Ukuziqhelanisa, olu hlobo lokuhluza lokusila lusetyenziswa ikakhulu ekuqhubeni ingqolowa ecoliweyo kunye nokuhluzwa kwezinto eziphakathi, kunye nokuhluzwa komgubo. Uyilo olwahlukileyo lokwahlulahlula luhambelana neendlela ezahlukeneyo zokuhluza kunye nezixhobo eziphakathi.
1. Ubungakanani besakhelo sobunzima buyafumaneka kwi-640 × 640mm kunye ne-740 × 740mm.
Isakhelo seplififter senziwe ngeplastikhi yentsimbi, ngelixa iindonga zebhokisi yangaphakathi zinikezelwa ngentsimbi engenasici. I-counterweight ehlengahlengiswayo inyuswe nge-SKF ekhethekileyo (eSweden) uhlobo lokuzilungelelanisa kunye neebheringi zeeroller ezizenzekelayo.
3. Izakhelo zesisefo zenziwe ngomthi ongeniswa ngaphakathi nangaphandle omabini agqunywe ngeplastikhi ye-melamine lamination. Banokuhla kwaye bayatshintshana. Izakhelo zesisefo zixhotyiswe ngeetreyi zensimbi ezingenasici. Icandelo ngalinye liphela lixinaniswe sisakhelo sesinyithi kunye noxinzelelo lweemicroctric screws ezivela phezulu. Kulula kwaye kuyakhawuleza ukutshintsha iskimu sokuhluza isicwangciso xa kufuneka.
4. Iindawo ekukhutshwa kuzo esi sixhobo sokuhluza umgubo ziza neziciko zeplastikhi ezimnyama ngaphakathi komda womxhuzulane.
5. Iisefu zeSEFAR zamkelwe.
6. Iisefu ze-NOVA zikwakhona ukulungiselela iiplani. Isefu yayo yangaphakathi yealuminium iyakwazi ukuhlangabezana neemfuno zococeko oluphezulu, kwaye indawo yayo enkulu yokubopha kunye nolwakhiwo lwenzululwazi lunokubonelela ngokusebenza kakuhle kwe-sieving kwindawo encinci.
7. Onke amacandelo anxibelelana nezinto ngokuthe ngqo ayenziwe ngentsimbi engenasici okanye ezinye izinto ezisemgangathweni, eqinisekisa isidanga sokucoceka.
8. Isicwangcisi sethu siza nesakhiwo seemodyuli ngokweemfuno zakho. Iyafumaneka kumacandelo amane amacebo okucwangcisa, amacandelo amathandathu amacebo okucwangcisa kunye neecandelo lesibhozo leplififter, ukuze wenze uninzi lwendawo esele ikhona.
9. Udonga lwangaphakathi kunye nomnyango uza neendlela eziphambili zokugquma ubushushu, kuthintela iimeko zokunyibilika kobumanzi ukuya kuthi ga kwinqanaba elikhulu.
(iyunithi) Isefa Ukuphakama (mm) Isakhelo Ukuphakama
(akukho sakhelo sisefe siphezulu)
(mm) Ukuphakama kweMin yokuFakelwa
(kW) Ububanzi bokujikeleza
(mm) Isantya esiphambili seShaft
(r / min) Indawo yokuCoca
I-FSFG4 × 16 4 1800 1720 2800 3 3 64 ± 2 245 21.1 29.1 2550 2900
I-FSFG8 × 16 8 1800 1720 2800 5.5 7.5 42.2 58.2 3200 3500
Lo matshini uqhutywa yimoto efakwe ngaphakathi kwesakhelo esiphambili kunye nokulinganisela okokulinganisa ngokulinganayo. Umatshini ngamnye unesefu ezi-4, okanye ezi-6, okanye ezi-8 ngaphakathi. Izinto ezahlukileyo zihamba ziye kwicandelo elahlukileyo kwindlela yalo. Ngokwendlela yoyilo lomntu eyahlukileyo yezixhobo ezahlukeneyo, iisefa zihluza izinto ezahlukileyo ezinamatye ahlukeneyo kwiipaseji ezahlukeneyo zokugaya umgubo xa wonke umatshini usebenza.
Isakhelo seSieve kunye nesakhelo sokuhambisa
Uyilo olwahlukileyo lokudityaniswa kwesakhelo esiphambili kunye nezahlulelo kwisakhiwo esikhulu, kwaye umbandela wamkela ingxubevange ephantsi yemoto.
Ikholam yesakhelo sesieve
ikholamu yesisefo yamkela ingxubevange ephantsi ye-extrusion ebandayo engenamthungo kumbhobho wesinyithi, yamkela isakhiwo soqhagamshelo lwe-mortise-tenon phakathi kweplate ephezulu kunye nezantsi.
Isakhelo sesisefu somthi esenziwe ngesikwere, iplastikhi eyenziwe ngeplastikhi, enxiba okunganyangekiyo, thintela ukuvela komdaka, iikona ezifakwe isinyithi ngobulukhuni obomeleleyo, ubungakanani obufanelekileyo, ukutshintshiselana okufanelekileyo. Inkqubo yokutshixa nkqo ilula kwaye ithembekile, umsebenzi ocolekileyo kwisakhelo kuthintela ukuvuza komgubo.
Izicoci zesieve kunye nezicoci zetreyi
Izicoci zesieve zinokuthintela ukubhloka kwesisefo, kwaye abacoci betreyi banokutyhala ukuba izinto zihambe kakuhle.
Ifayibha yeglasi yokumisa.
Egqithileyo Ilifti yebhakethi
Okulandelayo: Umcoci weplani
Isicwangciso secandelo lamawele
Plansifter yomgubo omncinci
Isicwangciso seMono seCandelo
Izixhobo zomgubo wokugaya - isicoci
YYPYFP Series Womoya mqengqeleki Mill
Idilesi: IPoliu Quliang yeSithili sezoShishino iXinmi City
Ifowuni: +86 13633846327
Flour lokusila izixhobo Screw yokuthutha Xa umgubo lokusila ...
Umgubo wokutyala umatshini wokutyala umatshini / umcwangcisi welayisi ...
FSFG series plansifter isicelo ngokubanzi kumgubo wokugaya isityalo mihla kunye ri ...
Inkqubo yokususa ilitye kumgubo wokugaya
Kwindawo yokusila umgubo, inkqubo yokususa amatye kwingqolowa yi ...
Icandelo lokutya lishishini leentsika kuqoqosho lwesizwe lwase China, ...